कृषि क्षेत्रमा धेरै ठूला कुरा गरेर हुँदैन, साना साना काम गरे पुग्छ | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » कृषि क्षेत्रमा धेरै ठूला कुरा गरेर हुँदैन, साना साना काम गरे पुग्छ
कृषि क्षेत्रमा धेरै ठूला कुरा गरेर हुँदैन, साना साना काम गरे पुग्छ
अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
कृषि क्षेत्र अहिले निकै विवादमा तानिएको छ नि तपाईहरुको महासंघले यसको बारेमा केही गरिरहेको छैन त ?
–अहिले कृषि क्षेत्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्र विवादमा परेका छन् । कुनै क्षेत्र अछुतो छैन तर कृषि सबैको सरोकारका विषय भएका हुनाले यसमा धेरैको ध्यान गएको छ । र, यो राम्रो पक्ष हो । कृषि अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि असाध्यै समस्याबाट घेरिएको क्षेत्र हो । सरकारले यसलाई सामाधानतिर लाग्ने भन्दा पनि झन समस्यातिर लगिरहेको अनुभूति महासंघले गरेको छ । हाम्रो महासंघले किसानका लागि विगतदेखि आवाज उठाइरहेको छ । हरेक समस्याको अवगत सरकारलाई लिखित र मौखिक अवगत गराई रहेको छ । तर सरकारले सुनवाई गरेको देखिदैन । सामास्याहरुको बारेमा कुरा उठाउनका लागि हामीले महासंघको स्थापना गरेका हौं । हामीले स्थापनाकालदेखि नै सविधान निर्माण र अन्य नीति निर्माणमा महासंघले किसानका लागि आवाज उठाउँदै आएको हो । २००७ सालको आन्दोलन अघिदेखि नै यो देशमा किसानहरुले आन्दोलन गर्दै आएको नेपालको हरेक आन्दोलनमा किसानको भूमिका उच्च रहेको छ तर जब राज्यबाट किसानलाई सुविधान दिने कुरा आउँछन् अनि राज्य गौण बस्छ । किसानलाई सुलभ व्याजदरमा ऋण, विमाको कुरा, अनुदान तथा उत्पादनमा वृद्धि लगायताका कुरा राज्यले उठाएको हो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । यसमा महासंघले पैरवी गर्दै आएको छ ।
तपाईले भन्नुभयो, सरकारले समस्या समााधान गर्नुभन्दा बढी बल्झाउने काम गरेको छ कुन कुन ठाउँमा सरकारले समस्या क्रिएशन गरेको छ त ?
–सरकारले कृषिको हरेक क्षेत्रमा हात हालेको छ तर पुरा कही गरेको छैन । यो गर्छु त्यो गर्छु भनि योजना बनाउँछ । कार्यविधि बनाउँछ तर त्यो काम अधुरो छाडेर हिड्छन् । सरकारले बनाउँदै गरेको योजनाहरु सुन्दा र बुझ्दा रमाईलो र खुशी लाग्छ । तर, नतिजा शुन्य छ । सन् २०१३ सालमा बनेको योजनावद्ध विकासको पहिलो खाकाको पञ्चवर्षीय कृषि रणनीतिमार्फत देशलाई प्रवद्र्धन गर्ने जुन योजना बनाएको थियो । त्यो योजना अहिलेसम्म जहिको त्यही छ । कृषि रणनीति असफल हुनुको अर्थ नै सरकारले लिएको नीति तथा योजना गलत हो भने पुष्टि हुन्छ । अहिले पनि असफल प्रयासमा राज्य दौडी रहेको छ । ७० प्रतिशत पहाडी भूभाग छ, जहाँ मान्छेले बस्न सक्ने ठाउँ छैन । बाढी पहिरोको चपेटामा ती भूभागहरु परेको छ । तराई मधेशमा १७ प्रतिशत भूभाग अन्न भण्डारको रुपमा छ । त्यसलाई व्यवसायीक रुप दिन सकिरहेको छैन । राज्यले एउटै किसानलाई करौडो रुपियाँ दिने किसिमका नीति बनाइरहेका छन् । त्यो खालको नीतिले हाम्रो कृषि आगाडी बढ्न सक्दैन । खेती किसानीबाट कृषकहरु पलायन भइरहेको छ । आयातको मात्रा घट्दैछन् । अदुवा, अलैची, गोलभेडा, आँप जस्तो विषयको कुरा गर्नुस् । त्यो ठूलो विषय हो तर त्यतातिर ध्यान दिएको छैन ।
सरकारले तपाईहरुसँग नै सल्लाह गरेर ती योजना र रणनीतिहरु ल्याएको छ अनि अहिले विरोध किन ?
–हो, हामीसँग उहाँहरुले सल्लाह गर्नुहुन्छ । बेलाबेलामा बोलाएर हामीसँग अन्तरक्रिया गर्नुहुन्छ तर हामीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । हामीले दिएको सुझावलाई योजनामा समावेश गर्नुहुन्न । अनि त्यस्तो सल्लाहर र अन्तरक्रियाको के काम । सन् २०१३ तिर २० वर्षे रणनीति तयार भइरहँदा हामीलगायत अन्य सरोकारवालासँग कृषि मन्त्रालयले अन्तरक्रिया गरेको थियो । हामीसँग सल्लाह मागेको थियो तर सल्लाह माग्ने काम मात्र गर्यो
त्यो अनुसार इम्पिलिमेन्ट कही गरेको देखिदैन । हामीले उल्टाइ पल्टाई त्यो रणनीति पढ्यौ हामीले दिएको सुझाव कही उल्लेख गरेको छैन । पक्कै पनि हामीले गलत सुझाव दिएको थिएन होला । लाखौ किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने हामीले त्यही किसानको हक हितका लागि सुझाव दिएको होला तर किन कार्यान्वयन भएन, किन योजनामा समावेश गरिएन ? हामी हालसम्म त्यो २० वर्षे रणनीतिमाथि एक्यबद्धता जनाउन सकेका छैनौ । सरकारले नीति बनाउँदा पुरै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानेको हुन्छ । जुन हाम्रो देशका लागि सुहाउँदो हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो देशको कृषि अहिले पनि परम्परा र घरायसी तथा पारिवारिक रहेको छ । घरमा दुई कुखुरा पालेर त्यसको अण्डा विक्रि गरेर गुजारा गर्ने हाम्रो नेपाली छन् । दुईटा भैसी पालेर त्यसको दुध वेचेर गुजारा गर्ने हाम्रा किसानहरु छन् । त्यसैले आगाडी बढाउने, दुईबाट चार कसरी बनाउने सोच सरकारको देखिदैन । एकैचोटी फेदमै चढ्ने कुरा मात्र सरकारले पाइन्छ । त्यो लागु हुन सकिरहेको छैन । २० वर्षे कृषि रणनीति देशको मुल दस्तावेज हो कृषिका लागि । त्यसमा धेरै कुरा सच्याउन जरुरी छ । सन् २०१५ देखि त्यो रणनीति लागु भएको छ तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै प्रगति देखाएको छैन ।
तपाई र तपाई जस्ता थुप्रै संगठनहरुसँग अन्तरक्रिया र सल्लाह गरेर ल्याएको नीति तथा रणनीतिप्रति यस्तो असन्तुष्टि किन ?
–तपाईले भनेको जस्तो सल्लाह गरेर ल्याएको होइन । अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर सुझाव लिएको मा हो तर ती सुझाव कार्यान्वयनमै ल्याउनुपर्छ भन्ने गरि अन्तरक्रिया गरेको थिएन । औपचारिकताका लािग मात्र त्यस्तो गरोको थियो । त्यो रणनीति लागु भएपछि हामीले पटक पटक त्यसको विरोध गरेकै हो । जन्मदै गर्दा हामीले फरकमत राखेका थियौं । संशोधन गर्ने खालका कुराहरु भइरहेका छन् । किसानको हितमा संशोधन भयो भने राम्रै हुन्छ ।
पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने भनेको छ त्यो कतिको सम्भव हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–यो देश नीतिमा चल्ने देश होइन । जुन मन्त्री, जुन सरकार आउँछन् । नयाँ नयाँ योजना र नीति मात्र बनाउँछन् । बनेका नीतिलाई लागु गर्ने, अरु मन्त्रीले ल्याएको कार्यक्रमलाई लागु गराउने काम गर्दैनन् । सबैले नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउने काम मात्र गर्दै आएका छन् । कृषिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हरिबोल गजुरेलले ल्याउनु भएको कृषिका लागि २७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र ल्याउनु भएको थियो । उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने अहिलेको मन्त्रीले ल्याएको ५८ बुँदे कृषि नीतिमा केही समावेश गर्नुभएको छैन । अर्थात एउटा मन्त्रीले ल्याएको नीति अर्कोले लागु गर्नुहुन्न । अहिलेका मन्त्रीले पनि पाँचवर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने भन्नुभएको छ । सुन्नमा राम्रो छ तर लागु गर्न निकै चुनौति छ । घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई लागु गर्न अन्य कुराहरु पनि चाहिन्छ तर त्यसको लागि कुनै प्रयास गरेको देखिदैन ।
सरकारले कृषिमा गरेको गतिविधिले गर्दा त केही होला जस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?
–कृषि उत्पादन दोब्बर हुन गाह्रो छैन नेपालमा । तर, त्यसका लागि इच्छा शक्ति हुनु आवश्यक छ । त्यसका साथै वजार व्यवस्थापनदेखि भण्डारण, मूल्य लगायतको विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसपटक समयमा धान रोपाई भएको छ । धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ ।
सुखद कुरा हो । अन्य बालीको समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक छ । समर्थन मूल्य तोकेर हुँदैन । यदि उत्पादन भएको अन्नाज विक्रि भएन भने सरकारले त्यसलाई खरिद गर्छ कि गर्दैनन् । सरकारले खरिद गरेन भने किसानले त्यसलाई राख्ने कहाँ जस्ता विषय पनि सरकारले अहिलेदेखि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि भण्डारको व्यवस्था गरि दिनुपर्छ । पहिलो कुरा त विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाईट्याक्स लगाउने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
कृषिमा सरकारले कुनै सकारात्मक गरेको छैन त ?
–सबै नाकारात्मक छैन । केही कामहरु सकारात्मक भएका छन् । धान र उखुको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । यसपटक समयमा धान रोपाई सम्पन्न भएको छ । विमा लगायत सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने, स्थानीय कुरा गरेका छन् । यस्ता थुप्रै सकारात्मक कुराहरु ल्याएका छन् । तर त्यसले मात्र लिएका लक्ष्य पुरा हुँदैन ।
त्यसो भए सरकारका लागि महासंघको तर्फबाट के सुझाव छ त ?
–हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । यहाँका आधाभन्दा बढी जनसँख्या कृषिमा आश्रित छन् । अहिले पनि ६८ लाख घरपरिवारले पारिवारिक खेती गरिरहेका छन् । त्यसलाई अझै पनि सरकारले भन्दै आएको आधुनिकीकरण खेती, व्यवसायीक खेती, यान्त्रिकरणले छोएको छैन । ती किसानलाई कसरी व्यवसायीक कृषिमा ल्याउन सकिन्छ । कृषिलाई व्यवसायीक गर्ने भनेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि तथ्य सहित आउनुपर्छ । धेरै धेरै ठूलो ठूलो कुरा गरेर हुँदैन । साना साना कुरा गरे पुग्छ ।